Drones - Qalab Bilaash ah | Qalabka bilaashka ah (Bogga 3)
YI Erida, helitaanka barashada tricopter-ka ugu dhaqsaha badan adduunka in yar oo ka wanaagsan
Teknolojiyada 'YI Technologies' waxay hadda soo bandhigtay YI Erida, oo ah tricopter qurux badan oo lagu taxay inuu yahay midka adduunka ugu dhaqsaha badan.
Bar carruurtaada sida loo shaqeeyo diyaarad aan duuliye lahayn iyadoo loo mahadcelinayo Talon X1
Airwolf 3D waa shirkadda gacanta ku haysa horumarinta, qaabeynta iyo dhismaha Talon X1, oo ah diyaarad Drone ah oo loogu talagalay inay wax ka barato adduunkan adag
Mine Kafon Drone, oo ah nidaam loogu talagalay in lagu baabi'iyo miinooyinka dhulka lagu aaso
Mine Kafon Drone waa shaqada walaalaha Massoud iyo Madmud Hassani, oo ah diyaarad aan duuliye laheyn oo awood u leh baarista iyo baabi'inta dhammaan noocyada miinooyinka.
Hel caymis diyaaraddaada aan duuliyaha lahayn mahadsanid Verifly
Verifly, oo ah shirkad bilow ah oo Mareykan ah, ayaa hada ku dhawaaqday adeegeeda caymiska ku meel gaarka ah si ay ugu fuliso nooc kasta oo nashaadaad ah diyaarad Drone ah.
Ogaanshaha Yuneec SkyView FPV cusub
Dhowr jeer oo shaah iyo horudhac ka dib, Yuneec SkyView FPV ugu dambeyntii waa run, waa muraayad qofka ugu horreeya ah oo aad jeceshahay.
Kamaradan Tamron waxay kahortagi doontaa sawirada cakiran ee diyaaradaada aan duuliyaha laheyn
Tamron ayaa naga yaabiyay soo bandhigida kamarad muuqaal ah oo soo jiidasho leh oo si gaar ah loogu talagalay in loo isticmaalo nooc kasta oo diyaarad ah.
FreeBird One, waa quadcopter-ka ugu dambeeya ee waxqabadka badan
Dhowr bilood oo sugitaan ah ka dib, Duulimaadka FreeBird wuxuu ku guuleystey inuu iibiyo cajiibka FreeBird One, oo ah quadcopter xirfadle ah.
Europa Explorer, diyaaradda Drone-ka ah ayaa u safri doonta si ay u sahamiso badweynta dayax-gacmeedka Europa
Europa Explorer waa magaca loo yaqaan 'drone' oo ay sameysay NASA kaas oo loo diri doono si uu uga baaro satelite-ka Europe.
Xakamee diyaarad aan duuliye laheyn oo leh wiil da 'ah oo Game ah
Isticmaalaha diyaaradaha aan duuliyaha laheyn wuxuu maareeyaa inuu nolol cusub ku neefsado wiilkiisii ​​hore ee Game isagoo adoo u adeegsanaya sida hago fog diyaaradaha droneska, wax aad u xiiso badan ...
PD-100 Black Hornet, oo ah helikabtar mini sahamin ah
Prox Dynamics waa shirkadda ka dambeysa PD-100 Black Hornet, oo ah helikabtar yar oo sahan ah oo ay tijaabinayaan Ciidamada Badda ee Mareykanka.
Trident, oo ah diyaarad qumaatiga u kaca oo laga sameeyay Raspberry Pi 3
Trident waa magaca diyaaradaha qumaatiga u kaca ee cusub, mashruuc lagu abuuray aasaaska mid ka mid ah had iyo jeer xiisaha Raspberry Pi 3.
UPM waxay dooneysaa inay adeegsato diyaaradaha aan duuliyaha laheyn si loo joojiyo wasakheynta
Jaamacadda Polytechnic University of Madrid, UPM, ayaa ku howlan mashruuc ay ku doonayso inay ku joojiso wasakhda iyadoo la adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
AT&T si ay u bilaabaan adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha laheyn si ay u baaraan munaaradeeda isgaarsiinta
AT&T, oo ah shirkad hormuud u ah isgaarsiinta, ayaa hadda ku dhawaaqday abuuritaanka barnaamij gaar ah oo lagu baaro munaaradeeda iyadoo la adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan 'DJI drones' ma awoodi doonaan inay duulaan aagag gaar ah inta lagu guda jiro ciyaaraha Olombikada Rio
DJI ayaa hada ku dhawaaqday inay ku soo rogi doonto aagag diyaaradaheeda drones-ka halkaas oo aysan awoodi doonin inay ku dhex duulaan softiweerka inta lagu guda jiro Ciyaaraha Olombikada ee ka socda Rio de Janeiro.
Eyesse, oo ah diyaarad aan duuliye lahayn oo awood u leh inay keydiso bakhaar
Eyesse waa mashruuc laga fulinayo Hardis Group, oo ah diyaarad aan duuliye lahayn oo awood u leh inay ku fuliso alaabada bakhaarka qaab gebi ahaanba ismaamul ah.
Google ayaa ogolaansho ka heshay inay ku bilawdo tijaabinta diyaaradaheeda drones-ka Mareykanka
War-saxaafadeed hadda uun laga soo saaray Aqalka Cad ayaa lagu shaaciyay in Google ugu dambaynti awood u yeelan doonto in ay ka bilawdo tijaabinta droneskeeda Maraykanka.
Shirkadda Lufthansa ayaa adeegsan doonta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan 'DJI drones' si ay u baaraan waxyeelada ka iman karta diyaaraddeeda
Shirkadda Lufthansa ayaa hadda ku dhawaaqday heshiis mabda 'ahaan la leh DJI si loo bilaabo adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan' drones 'si loogu waxyeeleeyo baaritaanka ay diyaaraddu waddo
Airbus iyo Dedrone ayaa kala saxiixday heshiis kor loogu qaadayo amniga garoomada diyaaradaha
Airbus iyo Dedrone ayaa hada ku dhawaaqay heshiis wada shaqeyn oo dhexmara labada shirkadood kaas oo ay ku doonayaan in lagu kordhiyo amniga garoomada diyaaradaha.
Tani waxay noqon kartaa muuqaalka rasmiga ah ee GoPro Karma
Waxaa jira bilooyin badan oo aan sugeynay GoPro inay soo saarto diyaaradeed cusub oo loo balan qaaday, moodel maanta ...
Lehmann Aviation waxay soo bandhigeysaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee cusub oo loogu talagalay adeegsiga xirfadleyda
Lehmann Duulista ayaa hadda sii deysay war-saxaafadeed ay ku shaacineyso soo saarista noocyo cusub oo drones ah oo loogu talagalay suuqa xirfadda.
Ardayda kuleejka California waxay abuuraan 3D diyaarad aan duuliye lahayn oo loogu talagalay isticmaalka beeraha
Ardayda wax ka barata jaamacada Cetys University ayaa hada soo bandhigay mashruuc ay diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ah loo sameeyay iyadoo lagu daabacayo 3D si loogu isticmaalo beeraha.
Tanky, oo ah diyaarad duulimaad ah oo aad kula yaabi doontid xawaareheeda
Tanky Drones waa shirkad fadhigeedu yahay Kaliforniya, Mareykanka, taas oo war u ah maanta soo jeedin gaar ah oo ...
Soo saarista guusha mashruuca Facebook ee Aquila ee tijaabooyinkeedii ugu horreeyay ee dhabta ah
Facebook wuxuu ku dhawaaqayaa guusha tijaabadii ugu horreysay ee laga qaaday drones-ka lagu sameeyay mashruuca Aquila.
PrecisionHawk Lancaster 5, diyaarad cusub oo casri ah
Gelitaanka meesha aan ka hadli doonno diyaaradda cusub ee loo yaqaan 'PrecisionHawk drone', oo ah nooc lagu suuq geyn doono magaca Lancaster 5.
Amazon Prime Air waxay ka bilaabi doontaa tijaabada UK
Mashruuca Amazon Prime Air ee Amazon wuxuu ka bilaabi doonaa tijaabinta markii ugu horeysay dhulka dhabta ah magaalooyin kala duwan oo UK ah.
DGT waxay daraasad ku samaysaa abuuritaanka suurtagalka ah ee Isbaanishka ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee leh radar
Pegasus waxaa laga yaabaa in maalmaheeda lagu tiriyo gudaha Spain tan iyo markii DGT ay darseyso suurtagalnimada in lagu rakibo diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan radar ee waddooyinkeena.
Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Drones-ka ayaa soo bandhigaya Vanguard oo ah diyaarad Drone ah oo kaa yaabin doonta
Muddo aad u dheer ka dib iyaga oo aan wax war ah ka helin shirkad sida Airborne Drones ah, ugu dambayntii waxay uun sameeyeen warka iyagoo uga mahadcelinaya bandhigga Vanguard.
Airbus ayaa adeegsan doonta diyaaradaha aan duuliyaha laheyn si ay u baarto waxyeelada ka imaan karta diyaaradaheeda
Airbus waxay ku dhawaaqeysaa inay bilaabi doonto adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee iswada si loo baaro waxyeelada dibadeed ee diyaaradeeda.
Amazon waxay rukhsad u siisay nidaam dib-u-buuxinta batteriga u gaarka ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Amazon waxay rukhsad u siisay in ka badan nidaam gaar ah si ay diyaaradahoodu ugu shuban karaan baytariyadooda nalalka waddooyinka iyo daaraha dawanka ee magaalooyinkeenna.
Ku abuur dagaallo adiga kuu gaar ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee 'Star Wars'
Hadda waad xusuusan kartaa oo aad noqon kartaa naqshadeeyaha dagaalladda cirka ee cajiibka ah mahadnaqa diyaaradaha drones-ka cusub ee cusub ee ku dhow inay suuqa galaan.
DJI drones ayaa markii ugu horreysay indhaha ku dhajiyay kamaradahahooda
DJI ayaa hada ku dhawaaqday suuq geynta kamarad cusub oo loogu talagalay diyaaradeeda oo awood u leh inay bixiso ilaa 7x zoom optical ah.
Kolombiya waxay adeegsan doontaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u baabi'iso miinooyinka dadka
Mid ka mid ah dhibaatooyinka waaweyn ee dowladda Kolombiya sanadihii la soo dhaafay, dhowaan la xaliyay, wuxuu ahaa Xoogagga ...
Thales Fulmar X, waa isbeddel cusub oo ku yimid diyaaraddaada aan duuliye wadin
Thales ayaa hadda ku dhawaaqay dhammaan faahfaahinta Fulmar X cusub, isbeddel ku yimid UAV-keeda gaarka ah oo hubaal ka farxin doona dhammaan taageerayaasha
DJI iyo DroneDeploy waxay u wada shaqeeyaan sidii loo abuuri lahaa barnaamijyo wax ku ool ah oo karti badan
DJI iyo DroneDeploy ayaa hada ku dhawaaqay saxiixa heshiis iskaashi oo ku saabsan horumarinta diyaaradaha aan duuliyaha laheyn si loo baaro qaab dhismeedka.
Hasselblad wuxuu dhigaa 80 kaamirooyinka megapixel-kaaga diyaaraddaada loo yaqaan 'DJI drone'
DJI waxay hada la saxiixatay Hasselblad heshiis wada shaqeyn si kan dambe uu mas'uul uga noqdo sameynta kamarad dhan 80 mega-pixel oo loogu talagalay diyaaradeeda.
Tani waa sida sagaalka sawir ee ugu wanaagsan ee lagu qaaday diyaarad duuliye u eg
Kadib markii la qabtay Tartankii saddexaad ee Caalamiga ah ee Dronestragram 2016, waxaan aakhirkii ka hadli karnaa sagaal sawir oo ugu wanaagsan sanadka oo lagu qaaday diyaarad aan duuliye lahayn.
Shiinaha ayaa qorsheynaya inay dhisto darbi hoostiisa biyaha iyadoo la adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Shiinaha gudaheeda waxay tixgelinayaan abuuritaanka darbi hoostiisa 'Great Wall' oo lagu dhisi doono iyadoo la adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee casriga ah
GoPro Karma, oo ku fikiraya qaabkeeda ugu dambeysa
Thanks to patent halkaas oo aan ku arki karno naqshado taxane ah, waxaan noqon karnaa kahor foomka ugu dambeeya ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee GoPro uu ku shaqeyn lahaa.
Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ayaa durbaba awood u leh inay ururiyaan macluumaadka cadastral
Micro Aerial Projects LLC wuxuu ka caawin doonaa 11 milyan oo reer Filibiin ah inay helaan xuquuqda guryaha ay leeyihiin taas oo ay ugu mahadcelinayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Eurotunnel waxay lahaan doontaa drones si ay u damaanad qaado amnigaaga
Kormeerka Eurotunnel ee aagga Faransiiska wuxuu ku dari doonaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si loo ogaado loona xaddido u guuritaanka suurta galka iyo ka imaanshaha aagga Ingiriiska.
Baqbaqa ayaa doonaya inuu kuu tababaro sida duuliye diyaaradeed
Baqbaqaaq, Tinker iyo Magic Maker ayaa isu yimid si ay isugu dayaan inay abuuraan mashruuc lagu tababaro dhalinyarada laguna baro adduunka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
DJI iyo Flyability waxay si wada jir ah uga shaqeyn doonaan sidii loo hagaajin lahaa diyaaradooda ka hortagga shilka
Labada DJI iyo Flyability labaduba waxay dhawaan shaaciyeen heshiis wadashaqeyn oo lagu hagaajinayo laguna bilaabayo diyaarad kahortaga shilka.
Sprite, oo ah nooca culus ee aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan 'Ascen AeroSystems'
Sprite, oo ah diyaarad aad u adkaysi badan, ka dib olole badan oo dad badan lagu uruuriyay ayaa ugu dambeyntii laga heli karaa suuqa.
Unión Fenosa ayaa ku sharraxaysa drones si loo hubiyo khadadka korantada
Unión Fenosa, waxay aakhirkii go'aansadeen inay awood u yeeshaan barnaamij iyada oo la adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, illaa 550 km oo xarig koronto ah dib loo eegay.
Rolls-Royce waxay saadaalineysaa imaatinka gawaarida badda ee ismaamulka mustaqbalka fog
Rolls-Royce waxay na tusaysaa fiidiyoow halkaas oo ay isku dayayso inay sharaxdo aragtideeda ku saabsan sida gawaarida iswada ay u yihiin mustaqbalka fog ee warshadaha.
Tani waa sida 7 xeerarka aasaasiga ah ee xeerarka ay ansixiyeen FAA ay u sii jiraan
Maamulka FAA ama Maamulka Duulista Hawada, ayaa soo saaray sharci cusub oo xadidaya adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo adeegsado dano ganacsi.
Faahfaahin cusub oo ku saabsan mashruuca CODE oo ay soo saartay DARPA
DARPA waxay na siisaa faahfaahin cusub oo ku saabsan mashruuca CODE halkaasoo laga raadinayo abuurista drones madax-bannaan oo aad u maskax badan.
Yuneec wuxuu cusbooneysiiyaa Typhoon H oo lagu daro kamarad 3D ah
Yuneec ayaa hadda ku dhawaaqday cusbooneysiin cusub oo loogu talagalay Duufaanteeda H oo laga soo bilaabo 2017 ku dari doono kamarad cusub oo xoog leh oo 3D ah.
Airobotics waxay abuurtaa nidaam otomaatig ah oo lagu duulo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Airobotics waa bilawga Israa’iil oo naga yaabinaysa xalka si diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay u duuli karaan si aan xad lahayn oo aan kala go ’lahayn.
Autodesk wuxuu noqonayaa maalgaliye cusub 3D Robotics
Autodesk, oo ah shirkad ku takhasustay soo saarista softiweerka naqshadeynta, iyada oo loo marayo Forge Found, ayaa noqotay maalgaliye 3D Robotics.
Jindong wuxuu bilaabaa bixinta baakadaha iyadoo la adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Jindong, oo ah shirkad shiineys ah oo aad ula mid ah Amazon, ayaa hadda bilawday adeeggeeda geynta iyadoo adeegsanaysa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ku sugan meelaha fogfog.
NASA si ay u adeegsato helikobtarro iswada si ay u sahamiso Mars
NASA waxay muujineysaa noocyada ugu horreeya ee helikabtarradeeda iskiis u madaxbanaan ee loo diri doono Mars si ay howlo sahamin ah uga fuliso.
BioCarbon Engineering waxay muujineysaa diyaaradeeda gaarka ah howlaha dib u dhiraynta
BioCarbon Engineering waxay soo bandhigeysaa markii ugu horeysay diyaarad si buuxda u shaqeyneysa oo si gaar ah loogu talagalay howlaha dhiraynta.
Garoonka diyaaradaha ee Dubai ayay ahayd in saacad lagu xiro diyaarad Drone ah
Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Dubai waxay ahayd inay xirto 69 daqiiqo sababo la xiriira diyaarad aan duuliye lahayn oo ku dhex duuleysa hawadeeda la ilaaliyo.
Kala-guurka Altiuas, oo ah diyaarad Drone ah oo ay abuurtay iyo Afrika
Kala-guurka Altiuas waa diyaarad loo yaqaan 'drone' oo loo abuuray loona adeegsan karo Afrika taas oo u taagan nidaamkeeda qaaska-toosan ee u gaarka ah.
NASA waxay abaalmarin siisay Safe50, oo ah barnaamij iskiis u degta iyo soo saarista
NASA ayaa hada gudoonsiisay Safe50, softiweer aad u dhameystiran oo u ogolaanaya diyaaradaha aan duuliyaha laheyn inay duulaan oo ay iskiis u degaan.
Taksiga aan duuliyuhu wadin wuxuu bilaabaa inuu tijaabooyin ka qaado dalka Mareykanka
Shirkadda Ehang ee Aasiya, ayaa heshay ruqsad ay ku bilawdo tijaabinta hawlgalada taksiyadeeda aan duuliyuhu wadin ee Maraykanka.
Tayadaan Xiaomi Mi Drone waxay duubeysaa fiidiyowyadaada
Gelitaan meesha aan rabo inaan kuugu soo bandhigo tayada fiidiyowyada ee had iyo jeer xiisaha leh Xiaomi Mi Drone uu awood u leeyahay duubitaan.
Autodesk, 3D Robotics iyo Sony waxay bilaabayaan inay iska kaashadaan horumarinta diyaaradaha droneska cusub ee warshadaha
Autodesk, 3D Robotics iyo Sony waxay ku dhawaaqayaan inay aakhirka kordhin doonaan heshiiskooda iskaashi ee wanaagsan si loo horumariyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee drones-ka loo yaqaan.
Khariidaynta diyaaradaha Drone-ka ayaa si dhakhso leh u kasbatay mahadsanidiisa DJI iyo iskaashiga Skycatch
Labada Skycatch iyo DJI ayaa hada soo saaray bayaan ay ku shaaciyeen ururkooda si kor loogu qaado farsamooyinka khariidaynta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Matrice 600, oo ah diyaaradda ugu awoodda badan ee loo yaqaan 'drone' ee loo yaqaan 'DJI'
Waxaa jira qaybo badan oo suuqyo ah oo kolba marka ka dambeysa ay sii kordhayaan xiisaha ay u qabaan waaxda ...
Covão do Conchos oo ka socota indhaha shimbirta, dalool dhulka ku yaal oo marinkeedu aad u adag yahay
Covão do Conchos waa mid ka mid ah baraha ugu quruxda badan uguna quruxda badan ee aan ka heli karno Boortaqiiska. God weyn oo aan ku soo bandhigno aragtida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Baalal u eg fiidmeerta noocyadan duullimaadyada aan duuliyaha lahayn ah
Koox cilmi-baareyaal ah oo ka socda Jaamacadda Southampton ayaa ku guuleystay inay soo saaraan nooc baal-biyoloji ah oo la mid ah fiidmeerta.
Baqbaqaaq Sequoia waxay dooneysaa inay kacdoonsato adduunka beeraha
Baqbaqadu waxay soo saartaa kamaraddeeda cusub ee Sequoia oo ay ku rabto inay ku beddelaan oo ay ugu xagliyaan shaqada beerashada dhammaan noocyada beeralayda.
3 diyaaradood oo loo adeegsado beeraha
Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan 'Drones' ee beeraha ayaa faafaya waxbadan, sidaa darteed waxaan soo bandhigeynaa seddex nooc oo drones ah oo loo adeegsan karo horumarinta dalagyada.
Ka taxaddar, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waa khatar waana dili karaa
In kasta oo ay u muuqan karto, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waa kuwo khatar ah oo haddii aadan ugu isticmaalin taxaddar iyo taxaddar, si fudud ayey wax u dili karaan.
Maqaal xiiso leh oo aan isku dayeyno inaan jawaab ka bixinno su'aasha ah; Ma u qalantaa iibsashada diyaarad aan duuliye lahayn?
Moodooyinka miisaanka dhabta ah ee mahadsanid diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo sawirro xallinta sare leh
Akadeemiyada Farshaxanka Farshaxanka ayaa ka dhigeysa mid ka mid ah moodooyinka miisaanka ugu fiican iyadoo la adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Drones oo ay ku rakiban yihiin kaamirooyin qeexitaan sare leh
Joogitaanno gaar ah oo ay la socdaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo ul
Fiidiyow xiise leh oo nala tusay waxa la gaadhay markii aad diyaarad drone ah ku xidhato tiir ama dhowr cutub oo wixii ka sarreeya waxaad haysataa "gacmo" aad wax kaga qabato
Bixi batterigaaga drone-ka inta ay duuleyso
Laga soo bilaabo Jaamacadda Sydney waxaan ka helnaa maqaal sharxaya sida ay ugu guuleysteen inay soo buuxiyaan baytariga diyaarad duullimaad ah.
Tower, codsi 3D Robotics ah ayaa noo oggolaanaya inaan xakameyno xuduudaha duulimaadka diyaaradda
Qodobka aan ku tusayno barnaamijka 3D Robotics-ka ah ee noo oggolaanaya inaan xakameyno xuduudaha duulimaadka ee diyaarad.
Suurtagal ma tahay in lacag laga helo Qalabka Bilaashka ah?
Lacag ma ku heli kartaa Qalab Bilaash ah? Miyay tahay qaab ganacsi oo la adeegsan karo? In kasta oo dad badani aaminsan yihiin si ka duwan, Qalabka Bilaashka ah ayaa lacag samaynaya.